CAAFIMAAD: Martin Vrijland
Kaneecada maamulaysa talaalka waa mustaqbalka
Filed in CAAFIMAAD	by Martin Vrijland	on 9 Febraayo 2016	• 5 Comments
Waa wax aan suurtagal ahayn in la aamino in fayruuska zika uu yahay khatar dhab ah caafimaadka bulshada. Warbaahinta guud waxay mar kale cadeyneysaa in awoodda dib-u-celintu ay hubiso in aad rumaysan tahay. Hase yeeshe, waxaa suura gal ah in lagu daboolo khaladaadka tallaalka ee lagu sameeyay Brazil, kaas oo haweenka uurka leh laga soo bilaabo 2015 [...]
Isticmaalka daroogada, saliida CBD, maskaxda iyo niyadjabka
Filed in CAAFIMAAD	by Martin Vrijland	on 10 September 2015	• 11 Comments
Dhammaan sheekooyinka ku saabsan qulqulka qaxootiga iyo dhammaan noocyada kala duwan ee falanqaynta wararka, waa wakhti ay mar labaad soo celiyaan wax wanaagsan. Intaas ka dib, kuwan waa sheekooyinka oo dhan oo kaliya inoogu tilmaamaya dhibaatooyinka aduunka iyo qorshayaasha nefarious ee fasalka xukunka. Sheekadan oo aan maanta idiin soo bandhigayo waa [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.382.743